Three Row Roller Slewing Bearing Factory - China Three Row Roller Slewing Bearing ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
Rotary Drilling Rig Machine သည် Slewing ring Bearing မြင့်တင်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။
သုံးတန်း roller slewing bearing တွင် အပေါ်၊ အောက် နှင့် radial raceways များကို ပိုင်းခြားထားသည့် ထိုင်ခုံကွင်း (၃)ကွင်းပါရှိပြီး၊ ၎င်းသည် roller ၏ load capacity ၏အတန်းတစ်ခုစီကို သတ်မှတ်ဖော်ပြနိုင်ပြီး မတူညီသောဝန်များကို တစ်ပြိုင်နက် ထမ်းနိုင်သည်။
အကြီးစားစက်ယန္တရားများအတွက် ဂီယာသုံးတန်း Roller Slewing Bearing
1. လျင်မြန်စွာ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ကြမ်းအတွက် EN3.1 နှင့် EN3.2 Certificate ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့သည် Slewing Bearing အတွက် CCS ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
4. သုံးတန်း roller တွင်ကြီးမားသောဝန်ရှိသည်။
5. ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လျော်သော မော်ဒယ်များကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပြီး ကောင်းမွန်သော အရောင်းဝန်ဆောင်မှုရှိသည်။
ရေကြောင်းကရိန်းအတွက် အတွင်းပိုင်းဂီယာသုံးတန်း ကြိတ်စက် Slewing Bearing
1. Three row roller slewing bearing ထိုင်ခုံကွင်းသုံးခုဖွဲ့စည်းထားသည်။
2. Three row roller slewing bearing တွင် လေးလံသောတာဝန်ရှိသည်။
3. Three row roller slewing bearing သည် ဝန်အများဆုံး စွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘီးတပ်ကရိန်းအတွက် လေးလံသောဝန်နှင့်အတူ ဘီးတပ်ကရိန်းသုံးတန်း၊
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် slewing bearing စက်ရုံဖြစ်သည်။
Heavy Duty အရည်အသွေးမြင့် Three Row Roller Slewing Bearing
1. ထုတ်ကုန်၏လုပ်ငန်းခွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတိုင်းကို တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်နိုင်စေရန် သေချာစေရန် စက်ရုံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုများ ပေါင်းစပ်ခြင်း။
3. အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုပ်ပိုးမှု၊ အမြန်ပို့ဆောင်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောပင်လယ်၊ ကုန်းကြောင်းနှင့်လေကြောင်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး။
4. အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုသည် သုံးစွဲသူများ၊ အတွေ့အကြုံကောင်းများ ရရှိစေရန် အာမခံပါသည်။
XZWD|ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းငြီးငွေ့ဖွယ်စက်အတွက် လေးတန်းသုံးတန်း Roller Slewing Bearing
1.Q: သင်သည် ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူဟုတ်ပါသလား။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် အနှစ် 20 အတွေ့အကြုံရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Slewing bearing ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
2.Q: မင်းရဲ့ပေးပို့ချိန်က ဘယ်လောက်ကြာလဲ။
A: ယေဘုယျအားဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများ စတော့တွင်ရှိနေပါက 4-5 ရက်ဖြစ်သည်။သို့မဟုတ် 45 ရက်အတွင်း ပစ္စည်းမရှိပါက အရေအတွက်အလိုက် ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
3.Q: နမူနာပေးပါသလား။အခမဲ့လား ဒါမှမဟုတ် အပိုပါလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ နမူနာကို ပေးနိုင်ပါတယ်၊ ဒါက အပိုပါပဲ။
4.မေး- လုပ်ငန်းအခြေအနေအရ အထူးစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသလား။
A- ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများအတွက် slewing bearings များကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
5.Q: မင်းရဲ့အာမခံချက်က ဘယ်လိုလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်သက်တာရောင်းချပြီးနောက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။
သုံးတန်း roller slewing ring bearing ကို ထိုင်ခုံကွင်းများ၊ အပေါ်ပတ်လမ်းများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ပတ်လမ်းနှင့် radial orbit ကို တစ်ဦးချင်း ခွဲခြားထားခြင်း မရှိသောကြောင့် rollers များ၏ ဝန်ကို အတည်ပြုနိုင်စေပြီး မတူညီသော load အမျိုးမျိုးကို တပြိုင်နက် ဆောင်ရွက်နိုင်စေသည်။ သုံးတန်း roller slewing ring bearing ၏ carring capacity သည် model လေးခုတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး axial နှင့် radial size သည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကြီးမားသည်၊ သုံးတန်း rollre slewing bearing ring ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည် အလွန်ခိုင်မာသည်။